Nahazo Loka Ooreka - Ny mpahay lalàna ao Frantsa online!
Nahazo Loka Ooreka
Ny arbitral mari-pankasitrahana dia nisy ny fanapahan-kevitra nataony ny fitsarana izay ahitana ny arbitrators. Ny nanao sonia ny fifanarahana mety manaiky fa ny fifandirana hitsangana avy amin'ny fifanarahana io dia azo atolotra ny arbitral tribonaly dia: ny fanelanelanana fifanarahana
Tsara ho fantatra: ny fanelanelanana fifanarahana mety ho vokatry ny fanelanelanana fepetra dia tafiditra hatramin'ny voalohany ao amin'ny fifanekena.
Mety ihany koa ho ny vokatry ny marimaritra iraisana nanao sonia manaraka ny fisehoan-javatra ny fifandirana (lahatsoratra ny CPC). Ny mpanelanelana fifanarahana tsy maintsy ho ao amin'ny fanoratana (lahatsoratra ny CPC). Raha tsy izany, izany dia"zero" Ny arbitral fitsarana dia tsy misy fitsarana ny fanjakana. Izany dia ahitana ny arbitrators voafantina sy ny karama avy amin'ny antoko. Ny arbitral loka tantanana indrindra amin'ny lahatsoratra ny ny Fehezan-dalàna sivily ny fomba (CPC). Tsara ho fantatra: ny arbitral loka ho nampahafantarina ny antoko. Izany dia tsy maintsy niditra an-tsehatra araka ny antoko no afaka manolotra ny tohan-kevitra ao anatin'ny iray adversarial fomba fanajana ny zon'ny olona rehetra. Ny antoko politika dia tsy maintsy mandoa ny arbitrators ho an'ny sasany ny fotoana mba hanapa-kevitra.
Ny lany ity hataka andro mahatonga ny fiafaran'ny fanelanelanana fitsarana.
Ny arbitral tribonaly dia manapa-kevitra araka ny fitsipiky ny lalàna (ny lalàna, sns). Na izany aza, ny antoko mety manaiky fa ny arbitral tribonaly dia manapa-kevitra araka ny amiable compositeur: amin'ity tranga ity, ny arbitral tribonaly mety fitsipika sy ny hitsiny tsy tena ao tsara.
Raha vao nadika, ny arbitral loka no res judicata eo amin'ny antoko. Ny antoko noho izany dia tsy maintsy mitoetra amin'ny Fa, ny arbitral loka mety ho coated amin'ny exequatur ny mpitsara (tsy mpizara).
Ny fitsarana mahefa dia ny fitsarana momba ny de grande ohatra (tgi) ao amin'ny fahefana izay ny arbitral mari-pankasitrahana efa natolony.
Ny fangatahana exequatur dia tsy maintsy alefa any amin'ny biraon'ny tgi.
Izany dia ilaina mba hametahana ny tany am-boalohany na mandika ny fanelanelanana fifanarahana sy ny arbitral loka. Ny antoko mety efa nanaiky fa ny arbitral loka ho appealable mialoha ny Fitsarana ambony sy ny fitsarana ambony ao ambony eo anoloan'ny Fitsarana tampony. Raha ny antoko tsy nanaiky ny mety hisian'ny antso, ny arbitral loka mety ho ny foto-kevitra ny hetsika iray ho fanafoanana mialoha ny fitsarana ny fanjakana (lahatsoratra ny ccp).
Na inona na inona mifanohitra amin stipulation dia heverina ho tsy voasoratra.
Ny fitsarana izay annuls ny arbitral loka fitsipika momba ny fahamendrehan ny fifandirana, ao anatin'ny faritry ny andraikitry ny mpanelanelana, raha tsy nanaiky ny antoko.
Ottenere un avvocato: quanto è il costo